Damac, Cabsi iyo Ganacsato Fashilmay | Martech Zone
Axad, Juun 25, 2010 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Farqiga ugu weyn ee aan ku arkay dhammaan shirkadaha aan ka shaqeeyo guusha iyo guul darradu waa awoodda ganacsadaha ama ganacsigu ay dhab ahaan u fuliyaan. Waxay igu wareerineysaa inaan daawado asxaabta iyo ganacsatada kale ee aan gaarin guushooda sababtoo ah ma fuliyaan. Cabsida iyo hungurigu waa labada shay ee aan arko ee ka joojiya ganacsatada halistooda.
Waa kuwan tusaalooyin dhawr ah:
Ganacsade A wuxuu leeyahay badeecad aad u wanaagsan oo shaqeyneysa laakiin aan horumarin, magac lahayn oo aan diyaar u aheyn mudada hore. Muddo hadda laga joogo 3 sano, wuxuu giraangiraha giraangiraha. Waxa uu helay rajo kulul ka dibna way qaboojiyeen. Wuxuu fursado u helay la-hawlgalayaal tayo leh, laakiin wuxuu iska lumiyay waqtigooda aakhirkiina wuu iska diiday. Isagu waa micro-maaraynta waraaqaha sharciga, suuq geynta, iyo waxkasta oo ku saabsan shirkadda maxaa yeelay wuxuu u maleynayaa inuu wax walba sameyn karo. 3 sano.
Aynu nidhaahno shirkadani waxay noqoneysaa shirkad $ 500k ah sannad gudihiis. Ilaa hadda, taasi waxay ka dhigan tahay inay lumiyeen in ka badan $ 1 milyan waxqabad la'aan awgeed.
Aynu nidhaahno shirkadda waxaa lagu qiimeeyaa $ 5 milyan. Mulkiiluhu ma doonayo inuu u dhiibo saamiyada muhiimka ah ee shirkadda kuwa ka caawin kara inuu ka baxo dhulka. Wuxuu u maleynayaa haddii uu ka tago 10% dheeraad ah lahaanshaha, inuu $ 500k siinayo lamaanaha. Xusuusnow in $ 1 milyan oo dakhli lumay? Sababtoo ah lama siin $ 500k lamaanaha, hadda wuxuu lumiyay $ 1 milyan oo dakhli ah… iyadoo lacagtaas badankeedu ay tahay asaga. Taasi waxay ka dhigan tahay in madax adayggiisa gorgortanka boqolkiiba ka hooseeya ay dhab ahaan isaga ku kacayso lacag. Dhaqaalaha yaabka leh, waan ogahay.
Dabcan, boqolleyda dhabta ah micnaheedu maahan ilaa dakhli ka dambeeyo. Ilaa iyo inta uu ilaalin karo lahaanshaha aqlabiyada, wuxuu heystaa inta badan qiimaha ganacsiga. 100% shirkad sameysa $ 100ka sano waa $ 100k. 51% shirkad sameysa $ 500ka sanadkii waxay ka badan tahay $ 250k sanadkii. Ayaa daneynaya haddii lammaanahaagu uu soo jiidan doono 10% dheeraad ah… haddii ay sii kordheyso khadkaaga hoose 250%?! Waxba ma huraysid oo shirkaddaada ayaa ka qiimo wanaagsan, waxaadna heleysaa lacag badan.
Ganacsade A ganacsigiisa weligiis dhulka ugama baxo. Ama, haddii uu sameeyo, waxaa lagu dhisay dad runtii aan wax maalgashi ah ku lahayn shirkadda sidaa darteed waa mid liita oo aan duullimaadka ka bixin. 10 sano kadib, wali madaxiisa ayuu xoqanayaa wixii qaldamay - laga yaabee inuu eeda saarayo tayada ku hareeraysan, isagoo aan ogeyn inay tahay xulkiisa.
Ganacsade B wuu baqay. Wuxuu heystaa badeecad caadi ah oo leh xuquuqda daabacaadda, calaamadaha ganacsiga, iyo shatiyadaha. Wuxuu hanti badan ku qaatay qareenada wuxuuna waqtigiisa ku bixiyaa indha indheynta internetka ee dadka laga yaabo inay u adeegsadaan sumcadiisa mid xadgudub ah. Cidna lama shaqeyn doono cabsi uu ka qabo inay xadaan fekerkiisa. Cidna kuma kalsoona. Sababtoo ah lacagtiisa oo dhan waxay kuxirantahay sharci ahaan waqtigiisana wuxuu ku qaatay daawashada dadka 'amaahda' fikradiisa - wax soo saarkiisa waligiis ma socdo.
Wax ka wanaagsan ayaa imanaya oo la aasaya Ganacsade B. Wuxuu la yaaban yahay waxa maanta dhacay.
Ganacsatada guuleysta uma ogolaanayaan hunguriga ama cabsida inay ku dhacaan. Waxay aqoonsadaan daciifnimadooda xirfadeed waxayna helaan hibo ay kaga guuleystaan ​​kuwaas. Iyagu ma daneeyaan haddii shaqaale kasta uu noqdo milyaneer marka lagu daro hantidooda… xaqiiqdii waxay ku raaxaystaan ​​fursadda ay ku abuuri karaan hanti kuwa kale. Sidoo kale waqti kuma lumiyaan tartanka ama kuwa wax sheega ... way fuliyaan, fuliyaan, fuliyaan.
Jul 26, 2010 markay ahayd 7:39 AM
Doug - Dhibco aad u fiican. Waxaan akhriyay maqaal bilihii la soo dhaafay Harvard Biz Review oo carrabka ku adkeeyay in istiraatiijiyadda aan waligeed laga soocaynin fulinta - waa inay isku mid ahaadaan. Odhaahda guud waxay tahay ganacsiyada badankood wey ku fashilmaan raasumaal la’aan awgeed. Waxaan aaminsanahay inay sabab u tahay guuldarro kooxda maamulka ah. Si fiican ayaad uqabsatay qodobbadan. Mahadsanid.
Jul 26, 2010 markay ahayd 10:13 AM
ful, ful, dil. Dariiqa lagu guuleysto waa inaad u tagto oo aadan sugin inuu kuu yimaado. Qodobbada wanaagsan halkan.
Halkii aad ka qori lahayd maqaalkan aan waxtarka lahayn, maxaad ugu bixi weyday suuqa oo aad u noqon laheyd ganacsade guuleysta naftaada haddii aad u maleyneyso inay sahal tahay?
Hagaag! Ninbaa leh naanaysta aan la garanayn ayaa u yimid inuu la wadaago, ra'yi, maqaal aanu ku raacsanayn! Wadada loo maro internetka!